संक्रमित बढे | eAdarsha.com
१. देशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । शनिबारसम्म संक्रमित हुनेको संख्या ३२३५ पुगेको छ । ती मध्ये ३६५ जना उपचार गरेर घर फर्केका छन् । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ ।
२. कास्कीमा पनि पहिलोपटक चारजना संक्रमित भेटिएको छ । अन्य उपचारका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगिएका र भारतबाट आएका व्यक्तिमा शुक्रबार र शनिबार कोरोना भएको पुष्टि भएको हो । यस घटनापछि अहिले कास्कीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । लकडाउन भएको दुई महिना बढी सम्म पनि पोखरामा कोरोना संक्रमण देखिएको थिएन ।
३. देशका ६६ वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका विस्तारका कारण संक्रमण बढेको देखिएको हो । जति सक्दो चाँडो संक्रमितहरुको पहिचान भई उनीहरुलाई उपचारमा ल्याउन सकियोभने मात्र यो संख्या घट्न सक्दछ । सरकारले २ प्रतिशतमा मात्र कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा पनि संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरुको मात्र स्वास्थ्य जाँच गर्ने कुरा छ । जाँच कम हुँदा भित्रभित्रै बढ्दै जाने आशंका बढ्दो छ ।
४. नेपालमा प्रारम्भमा हवाई यातायातबाट स्वदेश भित्रिनेहरुमा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो । पछि भारतबाट भित्रिएकाहरुमा देखियो । लकडाउन भएपछि हवाई यातायत र देशका नाकाहरु बन्द रहे । तथापि भारतसँगको खुला सीमानाका कारण विदेशबाट आउनेक्रम पूर्ण रुपमा रोकिन सकेन । भारतबाट आएका तथा तिनका सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखियो ।
५. अहिले सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन दिने नीति लिएको छ । शुक्रबार म्यानमार र युएईबाट दुई विमान आए । अरु देशबाट पनि नेपालीहरु फर्कदै छन् । स्वदेश फर्कन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । विना कारण रोक्न पनि मिल्दैन । तर कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन विधिपूर्वक उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था सरकारले राम्रोसँग गर्नु पर्दछ । क्वारेन्टिन नै कोरोना संक्रमणको क्षेत्र नबनोस् भन्ने तर्फ सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।